A1nepal.comबेल्जियममा दोस्रो चरणको लकडाउन: पहिलाको तुलनामा निकै कडा, के के छन् नयाँ नियम? - A1nepal.com
२०७७ कार्तिक १५, मा प्रकाशित
कोरोना संक्रमणको संख्या व्यापक रूपमा बढदै गएपछि सरकारले भोलि अर्थात् नोभेम्बर १ तारिखको मध्यरातबाट लागु हुने गरि दोस्रो चरणको लकडाउन जारी गरेको छ। विगत भन्दा कडा
लकडाउन भनिएको यसपाली देशका सिमानाकाहरु बन्द भने गरिएको छैन। बेल्जियम अहिले कोरोना केसमा युरोपको केन्द्रबिन्दु बन्न पुगेको छ।जहाँ सर्वाधिक संक्रमित छन् भने कोरोना बिरामीहरूलाई उपचार गर्ने ठाउँ अभावको कारण छिमेकी मुलुकहरूमा स्थानान्तरण गरिएको छ।
बेल्जियम सरकारले भोलि देखि लागू हुने गरी नयाँ नियम तोकेको छ। यी निम्न नयाँ नियमहरु लागु हुनेछन् र यो अहिलेलाइ १३ डिसेम्बर सम्मको लागि रहने छ। परिस्थिति अनुकूल घटबढ हुनेछ।
– नजिकको सम्पर्क सँधैको लागि १ जनामा मात्र सिमित रहने छ( सामाजिक दुरी र मास्क आबश्यक पर्दैन)
– घर बाहिर ४ जना सम्मसँघ भेटघाट गर्न पाइने छ ( सामाजिक दुरी र मास्क अनिबार्य)
– मृत्यु संस्कारमा बढिमा १५ जना जम्मा हुन पाइने र कुनै पनि खानेकुरा चियापान गर्न नपाइने
– बाहिरिदेशिय सीमना बन्द हुने छैन। बिना काम पनि हिँडडुलमा रोक लगाइने छैन। (लकडाउन १ मा बिना काम हिँडडुल( non essentieel verplaatsing) प्रतिबन्दित थियो र सीमना पनि बन्द थियो)
– बिबाह कार्यक्रममा केटा केटी, प्रमाणको लागि बसिदिनुनपर्ने साथी र संबन्धित अधिकारी बाहेक अरु उपस्थित हुन नपाइने।
– टेलेवर्क अनिबार्य गर्नु पर्ने, यदि टेलेवर्क संभब नभए मास्क अनिबार्य लगाउनु पर्ने र हावा आवत जावत हुनको लागि भेन्टिलेट खुला राख्न पर्ने।
– बिदा मनाउने पार्कहरु ३ नोभेम्बरबाट सबै कृयाकलाप हरु बन्द गर्नु पर्ने।
– होटल र बिएनबि( bed and breakfast) खुला रहने पाउने तर रेष्टुरेण्ट तथा बार बन्द गर्नु पर्ने। होटलमा खाना कोठामानै लगिदिनु पर्ने।
– फार्मेसी, खाद्दान्न संपन्धि सुपरमार्केट बाहेक सबै नन इसेन्सिएल पसलहरु बन्द रहने छन। यद्दपि घरमा डेलिभरि र पहिलानै अर्डर गरेको सामान पिकअप गर्न पाइने छ। पिकअप गर्न जाँदा पसल भित्र समन जान पाइने छैन।
– साइकल पसल र ग्यारेज हरु मर्मत संभारको लागि मात्र खुला रहने छ, बिक्रिको लागि होइन।
– कपाल काट्ने शैलुन मसाज सेन्टर लगाएत ग्राहक सँग सम्पर्कमा रहरे दिने सेवा संबन्धि सबै पसलहरु बन्द रहने छन।
– फ्याक्ट्रिहरु र निर्माण संबन्धि सबै व्यबासाय हरु खुला रहने छन। मास्क र सामाजिक दुरी अनिबार्य हुनु पर्ने।
– चिडिया खाना तथा जनवारहरुको पार्क बन्द हुनेछन।
– अहिले परेको बिदा( herfstvakantie) लाइ लम्बाएर १५ तारिक सम्म सबै स्कुल हरु बन्द हुने छन। १६ तारिक बाट खोल्नको लागि मुल्याँकन हुन सक्ने छ।
– माध्यामिक शिक्षाको दोस्रो र तेस्रो ग्रेडको सम्पर्कलाइ ५० % मा झारिने छ। डिसेम्बरमा यसको पुनर्मुल्याकंन गरिने छ।
– शिक्षकहरुको भेला अनलाइ गर्नुपर्ने छ।
– भौतिक रुपमा कुनै पनि टिम निर्माण हुने छैन।
बन्द गर्नुपर्ने व्यबसायीहरुलाइ सुबिधा प्याकेट संबन्धमा:
१९ अक्टोबरबाट लागु हुने गरि रेष्टुरेण्ट तथा क्याफे बन्द गर्नुपर्ने भएपछि सरकारले राहत प्याकेज ल्याएको थियो र त्यसमा भएको केहि अष्पष्टतालाइ २३ अक्टोबरमा पुन स्पष्ट पारि २६ अक्टोबरमा सरकारि स्टाडब्लाडमा प्रकासन गरेको थियो जुन यस प्रकार छ।
१) संघिए सरकारको सुबिधा :
पहिला दिदै आयको सुविधालाई लाइ दुइ गुना गरिएको छ। जस अन्तर्गत परिवार हुनेले ३२२८€ र परिवार नहुनेले २५८३€ पाउने छन। यो टेकवे तथा डेलिभरि गर्ने रेष्टुरेण्टहरुले समेत पाउने छन र २४ अक्टोबरबाट भर्नको लागि खुला गरिएको छ। हरेक महिनाको १० तारिक भुक्तान हुने छ।
२) प्रान्तिय सरकार भल्लान्दरनको सुबिधा:फ्लेमिश सुरक्षासंयन्त्र (vlaamsbeschermingsmechanisme) रेष्टुरेण्ट तथा क्याफे बन्द भएकाले अटोमेटेकि यो सुबिधा पाउने छन। अनिबार्य बन्द नहुने व्यबसायले अगिल्लो बर्षको यहि महिनाको कारोबारमा ६०% प्रतिसतले गिरावट आएको प्रमाण पेश गर्नु पर्ने छ। रेष्टुरेण्ट तथा क्याफेको हकमा १ महिनाको ९ जना भन्दा कम कर्मचारी हुनेले बढिमा ७५००€ र १० जना भन्दा बढि कर्मचारी हुनेले बढिमा १५०००€ पाउने छन। रजिस्ट्र कासा सिस्टम( white kassa) नभएका रेष्टुरेण्टले बढिमा ३०००€ मात्र पाउने छन।यसलाइ टेकवे तथा डेलिभरि सँग कम्बिनेसन गर्न मिल्ने छ। अर्थात टेकवे तथा डेलिभरि गर्नेले पनि यो सुबिधा पाउने छन। !!तर!! अगिल्लो बर्षको यहि महिनाको कुल कारोबारको ५०% भन्दा बढि टेकवे तथा डेलिभरी गरिएको थियो भने यो बर्ष ६०% ले गिरावट आएको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने छ।उदारण: यो बर्ष मात्र टेकवे डेलिभरि गर्नेले यो सुबिधा स्वत पाउने छ। अगिल्लो बर्ष यहि महिनामा टेकवे डेलिभरि गरेको तर कुल कारोबारको ५०% कम टेकवे डेलिभरि थियो( ६% भ्याट) भने पनि यो सुबिधा स्वत पाउने छ। अगिल्लो बर्ष ६% भ्याट कारोबारको ५०% भन्दा बढि भएमा यो बर्ष कारोबारमा कटौति भएको प्रमाण पेश गर्नु पर्ने छ। यसर्थ अधिकाशं शुसि रेष्टुरेण्टले यो सुबिधा पाउने छैन।
कोरोना भाइरस रोग कोभिढ-१९ सँग हतास नभइ धेरै नडराइकन साबाधान सहित सुरक्षित रहनुहोला सबैजना!